Ihe Pixel Google enweghi ike iguzogide mmiri n'ihi enweghi oge | Gam akporosis
Ihe Pixel Google enweghi mmiri n'ihi enweghi oge
Onye nta akụkọ Kelsey McClellan si na ebe nrụọrụ weebụ Wired na-ewu ewu ekpughewo site na Podcast ihe na-adọrọ mmasị banyere ihe ọhụrụ Google Pixel akara, ya na Pixel na Pixel XL.
Ma ọ bụ na ịgwa ndị nnọchi anya Mountain View obere oge ngosipụta nke ekwentị, ha kọwara ya ekwentị ọhụrụ nke nnukwu G ha anaghị ekpuchi mmiri, ọ bụ ezie na ee na splas, n'ihi na a nnọọ mfe ihe: enweghị oge.
Google Pixels enweghị nguzo mmiri n'ihi enweghị oge iji nweta asambodo IP dị mkpa
Anyị ahụworị n'oge na-adịbeghị anya na, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị a nwere cAsambodo IP53 nke na-enye ha nnukwu nguzogide splashes na obere ihe ọzọ, onye ọrụ emeela ule site na imikpu Google Pixel otu awa na ekwentị ahụ diri nsogbu na-enweghị nsogbu. Ma ọ bụ ahụkebe ikpe na anaghị m akwado ịkwado ya n'ihi na ị ga-atụfu akwụkwọ ikike ahụ na ekwentị gị nwere ike bụrụ akwụkwọ mara mma ma dịkwa oke ọnụ.
Ihe bụ nsogbu bụ Google ejirila aka ya rụọ ọrụ na ekwentị ya ogologo oge, tupu iwepu oru niile na njedebe nke 2015 ma maliteghachi. Kedu ihe nke a pụtara? Na Google Pixel na Google Pixel XL sitere na tebụl imewe gaa na tebụl mmepụta ihe na ihe karịrị ọnwa 9.
Na obere oge, ndị otu Google na-ahụ maka ọhụụ ọhụrụ ndị a ga-egbutu ebe, iguzogide aja na mmiri bụ otu n'ime ha. Kpachara anya, m na-ekwu ọzọ na ndị a ọnụ nwere IP53 asambodo nke na-enye ekwentị iguzogide splashes na ájá, ma ọ bụghị IP67 ma ọ bụ IP68 asambodo na eze na-ekwe ka a ọnụ na-emikpu ruo ogologo oge na-enweghị ihe ize ndụ ọ bụla.
A nta ihe ọjọọ na-atụle lnnukwu nnabata na akara ọhụụ nke nnukwu G na-enwe N'etiti ndị na-ebipụta akwụkwọ enwetalarị okpueze Google Pixel na Pixel XL dị ka njedebe kachasị mma n'oge a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe Pixel Google enweghi mmiri n'ihi enweghi oge
Dabere na WSJ, nyocha banyere mgbawa nke Note 7 na-egbu oge mmepe nke Galaxy S8